Faah-faahin ku saabsan qaraxii galabta lagu dilay taliyihii booliska ee Afgooye | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Faah-faahin ku saabsan qaraxii galabta lagu dilay taliyihii booliska ee Afgooye
Faah-faahin ku saabsan qaraxii galabta lagu dilay taliyihii booliska ee Afgooye
Taliyihii booliska degmada Afgooye marxuum Cabdiqaadir Nuurow.
Afgooye (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin ka soo baxaysa qaraxii galabta lagu dilay taliyihii booliska degmada Afgooye marxuum Cabdiqaadir Nuurow.
Taliyaha ayaa qaraxa lagula eegtay deegaanka Xaawo Cabdi ee duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Cali Aadan ayaa xaqiijiyay geerida taliyaha, waxaana uu sheegay in laamaha Ammaanka ay waddaan baaritaano.
“Alle ha u naxariisto taliyihii Saldhiga Booliska Degmada Afgooye Captan Cabdiqaadir Cismaan Nuunow iyo Mujaahidiinti la socotay ee galabta ku shahiiday qarax argagixisada ay la eegteyn gaari ay saarnaayeen, janada fardowso allaha ka waraabiyo Aamin Aamin” ayuu yiri Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose.
Inta badan Saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaa Qaraxyo Miino ah Al-Shabaab kula eegtaan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaa wadada xiriirsa Muqdisho iyo Afgooye.
deegaanka Xaawo Cabdi